Treviño, रक-काट चर्चहरूको भूमि यात्रा समाचार
ट्रेभिसो, रक-काट चर्चहरूको भूमि
मारिएला क्यारिल | | España, सप्ताहन्त
यो हप्ता म ध्यान केन्द्रित गर्दछु क्यास्टिला वाई लियोन। मंगलबार हामी क्यान रियो लोबो प्राकृतिक पार्कमा प्रवेश गर्छौं र आज भेटघाटको साथ छ ट्रेभिसो, एउटा शहर र काउन्टी जसमा तपाईं इतिहास र प्रकृति को माध्यम ले हिंड्न सक्नुहुन्छ।
1983 देखि Treviño एक छ ऐतिहासिक कलात्मक परिसर जुन सांस्कृतिक चासोको सम्पत्ति मानिन्छ र जसमा दरबारहरू, हर्मिटेजेस, पुलहरू, फोउरेनहरू र चर्चहरू बाहिर उभिन्छन्। आउनुहोस् सुन्दर ट्रेभियोलाई भेटौं।
2 Treviño पर्यटन
आज ट्रेभिसो भूमि शताब्दियौंदेखि बसोबास गर्दैछ किनकि उनीहरूले फेला पारेका छन् प्रागैतिहासिक अवशेष कि तिनीहरूले यसको गवाही दिन्छन्। Treviño को शहर १११1161 तिर स्थापना भयो नवारका राजा साँचो VI बाट, तर क्यास्टिलका राजा अल्फोन्सो एक्सले शताब्दीयौंपछि यो जित्यो र यो शहर प्रत्यक्ष शाही क्षेत्रको अधीनमा आयो। यो १ 1453 मा काउन्टी भयो, यस प्रकार म्यानरिक डे लारा वा कास्टिल्ला परिवारलाई हस्तान्तरण गरियो, त्यस समयमा र डुकस जारालाई।
Treviño आज भाग छ, La Puebla de Arganzón संग, Treviño enclave, जुन बारीमा ईलाभाको प्रान्त भित्र अवस्थित छ। दुबै नगरपालिकाहरूले टापु जस्तो बनाउँदछ र लामो समयका लागि तिनीहरू क्यास्टिला वाई लियोनबाट अलग गर्न चाहन्छन्, जहाँबाट तिनीहरू भौगोलिक रूपमा टाढा छन्, र बास्क हुन्छन्। वास्तवमा, बुर्गोस एक घण्टाको दुरीमा छ र भिट्टोरिया मात्र १ 18 किलोमिटर टाढा छ। स्पष्टतः क्यास्टिला वाई लेन केही जान्न चाहँदैन तर २०१ 2013 मा अर्को नयाँ प्रयासको साथ नयाँ चरण सुरु भयो।
ट्रेभिनो पशुपालन र कृषिबाट बाँच्दछ र व्यावसायिक हिसाबले यो भिट्टोरियासँग जोडिएको छ।
हामीले भनेझैं, ट्रेभियोको मोती यसको ऐतिहासिक र कलात्मक सम्पदा हो, तर हामी केही प्राकृतिक मोतीहरू थप्न सक्छौं। सुरु गरौं जसको पहिलो हृदय हो १ urban1661१ मा शहरी जटिल स्थापना भयो। शहरको लेआउट मध्यकालीन हो र त्यहाँ चर्चहरू र दरबारहरू छन् जस बीचमा १ñ औं शताब्दीदेखि ट्रेभियोको काउन्ट्स अफ काउन्ट्सको दरबार, आज यो सिटी हलको रूपमा कार्य गर्दछ, र १alace औं शताब्दीको बाँया प्यालेस.
ती मध्येका छन् साँघुरो सडक, बगैचा र सानो वर्ग, जस्तै चर्चहरु को अलावा सान जुआन बाउटिस्टाको हर्मेटेज वा सान पेड्रो Apóstol को पैरिश तेह्रौं शताब्दी देखि। पारासीको भित्र त्यहाँ सेतो भर्जिनको चित्र छ, १ Christ औं शताब्दीमा ख्रीष्टको कुर्सी र एउटा सुन्दर चुरिग्रीक्वे वेदीवेस। त्यहाँ आइतवार र धार्मिक छुट्टिहरु दिउँसो १ मा हुन्छ र जुलाई र अगस्त मा पर्यटक महीनाहरु, त्यहाँ टाउन हल द्वारा आयोजित पर्यटकहरु को लागी विशेष घण्टा हुन्छ।
यी निर्माणहरूमा अर्को हर्मेटेज थपिएको छ, सान रोक्, को १th औं शताब्दी र गोथिक शैली पुल जसले मद्दत नदी पार गर्दछ। ट्राभियो शहर, काउन्टी नै होइन, पहाडको दक्षिणी ढलानमा बसालिएको शहर हो जुन सबै भन्दा माथि मध्ययुगीन महल छ जसमा बारोक टावर र पेरिस चर्च रहेको छ, जुन एक महत्वपूर्ण चौबाटो हुने ठाउँ थियो।
बास्क देशसँग यस्तै सम्बन्धित छ Treviño मा विशिष्ट घर बलौटे ढु .्गाले बनेको छ र एकल भवन भन्दा बढि, यो भवनहरूको सानो समूह हो, प्रत्येकसँग यसको आफ्नै कार्यहरू छन्: गाईवस्तु, पराल, औजारहरू। र यदि तपाईं आफ्नो आँखा तीखा गर्नुहुन्छ, तिनीहरूका केही घरहरूमा अझै एडोब र काठका अंशहरू छन्, धेरै मध्यकालीन।
तर ऐतिहासिक सम्पदा भन्दा पर केहि प्राकृतिक पोष्टकार्डहरू छन् जुन हामी जान्न सक्छौं र त्यो वरपरका क्षेत्रमा छन्। धेरै टाढा सर्नको बिना, र सँधै कार वा बाइकबाट हुँदै, हामी सक्दछौं अन्य शहरहरू, गुफाहरू र चर्चहरूबारे जान्नुहोस् तिनीहरूमा खने। हो, उदाहरणका लागि, कलहरू Treviño को पवित्र गुफाहरू।
यी गुफाहरू तिनीहरू ट्रेभियो र अलाभा पहाडको बेंसीमा छन्। मद्दत नदी र धेरै धाराहरु यहाँ बग्छन्, चट्टानहरु, चट्टानहरु र खोलाहरु को नक्शा को रूप मा जुन मार्फत यो हराउन सजीलो छ। गणना गरिएको छ सय भन्दा बढी कृत्रिम गुफाहरू शताब्दीयौंसम्म उत्खनन गर्ने पुरुषहरू पनि ती हुन् प्रारम्भिक क्रिश्चियन कब्रिस्तान र चर्चहरू, Euskal Herria मा सब भन्दा पुरानो, र यदि यो एक भाग मा अन्वेषण जान्छ कि जान्न सकिन्छ।
ठ्याक्कै अन्वेषण तपाईं नजिकैको शहरहरूमा केहि प्राप्त, यसको आफ्नै सानो आकर्षण संग प्रत्येक। उदाहरण को लागी, को शहर छ फेडो एउटा बाटोको साथ जुन झाडीहरू बीच चढाईन्छ, जुन हामीलाई जहाँ दायाँ लैजान्छ स्यान मिगुएल र सान जुलिनको गुफाहरू, जहाँ हामी प्रवेश गर्न सक्छौं, र जसको भित्री भागबाट चट्टानमा खोपिएको चर्च बेंसीको अर्को पट्टि देख्न सकिन्छ। यो छ चर्च अफ अवर लेडी अफ द रक जुन ठाडो बाटोबाट पनि पुग्न सकिन्छ।
वरिपरि त्यहाँ पनि छन् सैन Torcaria र डे लास गोबास को गुफाहरूनजिकैको शहर लाओ। यहाँ केन्द्रित छaमन्दिर र गुफा कोठा को राम्रो मात्रा, सायद इबेरियन प्रायद्वीपमा सब भन्दा ठूलो हो, सेतो चूना पत्थरले कामलाई धेरै सजिलो बनाएकोले। यी चर्चहरूमा वेद, संस्कार र आर्चहरू थिए तर पहाडलाई वर्षौंसम्म खाली गरेपछि यसको जग बसाल्यो जुन ढल्यो। त्यहाँ मैदानमा चिहानहरू पनि थिए यो वास्तवमा एक पवित्र घाटी थियो।
यो महान काम कसले गर्यो? ठिक छ, यो निश्चितको लागि ज्ञात छैन र त्यहाँ निश्चित हेलो छ रहस्य शीर्षकको बारेमा। यो ज्ञात छ कि the औं शताब्दी वरिपरि हर्मिटहरू र पछि मठवासी समुदायहरू वा किसान परिवारहरू त्यस क्षेत्रमा आएका थिए जसमध्ये धेरैले मुसलमानहरूबाट शरण लिएका थिए। तर जसरी उनीहरूले सबै चीज खोपेका थिए, तिनीहरूले एघारौं शताब्दीमा यसलाई छोडिदिए र शहरहरू भेट्टाए जसको चुहावट पनीजस्तै भयो जहाँ केही अचम्मका ठाउँहरू छन्, र अरूले आजसम्म आश्चर्यचकित भएका छन् कि उनीहरूले त्यहाँ कसरी पुग्छन् भनेर अचम्म मान्दछन्।
अन्तमा, यदि हामी कारबाट आएका छौं भने हामी अन्य शहरहरू जस्तै जान्न सक्दछौं मार्किनेज यसका सान साल्भाडोरको गुफा र यसको चर्च चट्टानमा खोपिएको थियो, सान्ता लियोकाडिया वा सान जुआनको चट्टानको सम्पदा। त्यहाँको शहर पनि छ अर्लुझा जहाँ तपाईं सान जुआन डे लारियाको हेरिटेजमा जान सक्नुहुन्छ, जुन महल थियो, सानो किल्ला तर अझै किल्ला, धरहरा, पर्खाल र सिस्टरको साथ।
र यसैले हामी आफ्नो यात्रा जारी राख्न सक्छौं Saseta र Okina यसको तोपको साथ। यो सबै थाहा पाउन तपाईं २० किलोमिटर भन्दा बढी सर्नुहुन्न बगैंचा, टावर र गुफाहरू द्वारा पार गरिएको सुन्दर र उजाड भूमि हुँदै। त्यहाँ कुनै व्यक्ति छैनन्, यद्यपि त्यहाँ धेरै धेरै इतिहासहरू छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » España » ट्रेभिसो, रक-काट चर्चहरूको भूमि
युनाइटेड किंगडम र यसको मुख्य पर्यटक आकर्षणहरूबारे जान्नुहोस्
टाबारका टापुमा के हेर्ने